Madaxweyne kuxigeenka dalka oo markale ku baaqay in lakala saaro siyaasada iyo qabiilka. | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Madaxweyne kuxigeenka dalka oo markale ku baaqay in lakala saaro siyaasada iyo qabiilka.
Madaxweyne kuxigeenka dalka mr william ruto oo socdaal ku maraaya degaanka mt elgon ee bartamaha dalka ayaa markale ku baaqay in lakala saaro siyaasada iyo qabyaalada.
Ruto ayaa shalay isu soo bax uga qayb galay countiga bungoma halkaasoo ay kusoo dhaweeyeen siyaasiyiinta countigaasi iyo dadweyne fara badan.
Isagoo kahadlayaay kulan isu soo bax ah oo kadhacay skuulka sare ee toroso ayuu sheegay mr ruto in hada laga gudbay xiligii qabyaada.
Hogaamiyaasha degaanadaasi oo iyagu goobjoog ka ahaa goobta uu kahadlayaay mr ruto ayaa taageero dhanka siyaasada ah umuujiyay maamulka ay horkacayaan mdaxweyne uhuru kenyatta iyo mr william ruto.
Gavanaha countiga bungoma kenneth lusaka oo asagu goob joog ka ahaa kulanka halkaasi kadhacay ayaa sheegay inay garab taaganyihiin xisbiga JAP marka la gaaro doorashada guud ee dalka kadhici doonta sanadka 2017.
Mt ruto ayaa lagu wadaa inuu socdaalkiisa uu ku maro qaybo kale oo kamid ah gobolka,waxaana uu mudooyinkan dambe u xusul duubaayay sidii uu xisbiga jap tagaeero siyaasadeed uga helilahaa shacabka kudhaqan deegaanada kala duwan ee dalka.
Dhanka kale madaxweyne kuxigeenka mr william ruto ayaa sidookale sheegay inuu kenyaanka uga mahad celinaayo arimaha kiiska isaga kadhanka ah ee yaala maxkamada dambiyada dagaalka ee ICC oo uu tilmaamay in ducadoodii la aqbalay.